IN dumarka la qanciyo miyay adagtahay? | shumis.net
Home » galmada » IN dumarka la qanciyo miyay adagtahay?
IN dumarka la qanciyo miyay adagtahay?
Dhawaan ayaa waxa la furay tukaanka raga wanaagsan si ay dumarku uga soo xushaan ninka ay rabaan. Tukaanka ayaa ah mid aad u wayn oo ka kooban 5 dabaq. Raga tukaanka ku jiraana waa ay kala heer sareeyaan.
Dabaq walbana waxa ku qoran albaabka raga ku jira qiimaha ay leeyihiin. Sharciguna waxa uu dhigayaa hadii dumarku ka baxaan dabaq ayna dib ugu soo noqon doonin mar kale waligood.
Hababa maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa isa soo raacay dhowr hablood si ay tukaanka uga soo xushaan rag.
Markii ay tukaankii yimaadeen ee la soo dhaweeyay ayaa waxa ay koreen dabaqii koowaad oo ay albaabkiisa ku qornatahay ” Raga shaqaysta ee caruurta jecel”.
– Maxaa ka wanaagsan raga shaqaysta ee caruurta jecel.” Ayey yidhaahdeen hablihii. Laakiin bal aan eegno dabaqa labaad ayay ku heshiiyeen.
Dabaqan ayaa albaabkiisa waxa ku qoran in ay ku jitraan ” Rag haysta shaqo fiican, caruurta jedcel oo qorux badan.”
– Hmmm! Ayay yidhaahdeen hablihii. Bal ina keena ka kalena aan soo fiirinee! Ayay ku tashteen markana.
Dabaqana albaabkiisa waxa ku qoran waxa ku jira halkan ” Rag shaqo fiican haysta, caruurta jecel, qurux badan oo caawiya dumarkooda”
“Waa heer sare.” Ayay yidhaahdeen hablihii. Ina keena dabaqa afaraad ayaa ka sii fiican,e. Ayay hadana ku tashadeen.
Dabaqa afaraad,Dabaqana albaabkiisa waxa ku dhegan erayadan "Raga haysta shaqo fiican, caruurta jecel, qurux badan, caawiyo dumarkood oo ah romantik ah." Inta ay aad u farxeen ayaa waxa ay yidhaahdeen: – Waxa aan u malaynaynaa in uu ka sare ka sii daran yahay ee ina keena! ayay go’aansadeen. Dabaqa
shanaadAlbaabkiisa waxa ku dhegen "Qolkan waa madhan yahay oo waxa loogu tala galay in lagu muujiyo in ay adag tahay in dumarka la qanciyo." Meesha laga baxayaana waa dariishada, waxaan rajaynaynaa in aydin halkaa ka daadan .
Title: IN dumarka la qanciyo miyay adagtahay?